Mpanamboatra sy mpamatsy lamba fitaratra acrylic | Gokai
Ny orinasanay dia manana traikefa 10 + taona amin'ny resaka famokarana sy fanondranana. Ny fahafaham-po amin'ny tsenan'ny vokatra dia avo kokoa noho ny 95% miaraka amin'ny mari-pahaizana SGS, CE, ISO. Mifantoka amin'ny ravina vera akrilika avo lenta izahay. Momba ny hateviny sy ny hakitroka, ny fiheverana ny fifehezana kalitao sy ny serivisy tsara ho an'ny mpanjifanay.
Takelaka fitaratra akrilika
Ny famaritana anay
hateviny 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... hatramin'ny 100mm
Loko Ny loko rehetra dia tsy maninona, toy ny mazava, mangatsiaka, opal, fotsy, mena, manga, mainty, mainty sy fotsy, andro alina, fitaratra, sns. Azontsika atao koa ny manamboatra loko namboarina mifototra amin'ny fepetra takinao manokana.
Kalitao Ny takelaka vera akrilika ataontsika dia mifanaraka amin'ny mari-pahaizana CE / SGS / RoHS
1.We dia mpamatsy vera akrilika matihanina manana traikefa fanondranana mihoatra ny 10 taona ；
2. Ny fahafaham-po amin'ny tsenan'ny vokatra dia avo kokoa noho ny 95%.
3. Manana orinasa voamarina amin'ny CE sy SGS izahay.
4. Ny lokon'ny vera acrylic miloko tsy manjavona amin'ny 8-10 taona ho an'ny fampiasana ivelany.
5. Ny fandeferana ny hatevin'ny vera akrilika dia latsaky ny ± 0.1mm.
6. Ny takelaka fitaratra akrilika ataontsika dia manana tanjaka tsara sy fanoherana simika ambony.
7. Ny fanaingoana anay dia misy: anti-UV. mitarika maimaim-poana, voaroaka amin'ny feo, et
8. Eo amin'ny serivisinao izahay 24 ora an-tserasera.
9. OEM sy ODM misy.
Teo aloha: ravina plastika akrilika
Manaraka: manary taratasy acrylic
Cast amin'ny takelaka akrilika
Alefaso takelaka akrilika eo akaikiko